सार्वजनिक स्थलमै प्रहरीले महिलाले लामो लुगा लगाएर हिडेको भेटेपछि का’ट्न थाल्यो ! – Dainik Sangalo
October 31, 2020 705
अहिले पनि मुस्लिम महिला बुर्का लगाउँछन् । आफ्नो धर्ममा प्रचलित यो नियमलाई पालन गर्नु आज पनि मुस्लिम समुदायमा राम्रो मानिन्छ । तर यस्तो एउटा देश छ जहाँ महिलाले लामो कपडा लगाए सरकारले नै का’टी दिन्छ वा छोटो बनाइदिन्छ । चीनको शिन्कियाड। प्रान्तमा बस्ने बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय उइगुर मुसलमान माथि त्यहाँको सरकारले महिलाहरुलाई लामो कपडा लगाउन रोक लगाएको छ ।
यदि यो नियम विपरित कुनै महिलाले लामो कपडा लगाएको पाइए त्यसलाई तत्काल का’टेर छोटो बनाइने छ । मुस्लिम महिलाको लामो पोशाक र बुर्काले उनीहरुलाई काम गर्न र हिडढुल गर्न असअज भएकाले आधुनिक समयमा धर्मका नाममा दैनिक असहज हुने लुगा नलगाउन् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको सरकारको दाबी छ ।
‘डकुमेटिक अपरेशन एगनेष्ट मुस्लिम संगठन’का अनुसार उनीहरुलाई लाग्छ उइगुर मुस्लिम महिलाहरुको पोशाक धेरै लामो भएकोर बध्यताले यस्तो नियम लमगु गरेका हुन् । शिन्कियाड। प्रान्तमा बस्ने मुस्लिम समुदायका उइगुर मुसलमानमाथि पछिल्लो समय नयाँ नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।
पहिला त्यहाँका बच्चाहरुलाई धार्मिक कार्यक्रममा भाग लिन रोक लगायो ,त्यसपछि पुरुषलाई लामो दाह्री पाल्न र सार्वजनिक स्थानमा महिलालाई बुर्का लगाउन रोक लगाएको छ ।
Prevअ’नैतिक सम्बन्ध राखेको भन्दै गाउँलेहरूले मायालु जोडीलाइ रुखमा यसरी बाधिँदिए पुलिस हेरेको हेरै
Nextघरबाट सम्पर्क बिहिन भएका १५ वर्षीय टेकबहादुर र १६ वर्षीय सीताको शव यस्तो अवस्थामा फेलापर्यो ।
सहयोग माग्नु छोरिको बाध्यता छ अनि सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तब्य
आजको मौसम पुर्वानुमान कस्तो छ?
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126258)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (96598)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73673)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64033)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54802)